Fandrosoana fikarohana momba ny coatings ho an'ny ductile vy epc fanariana | Yingyi
Fandrosoana fikarohana momba ny coatings ho an'ny ductile vy epc fanariana
Ny vy nodular, toy ny karazana fitaovana vy mahery vaika miaraka amin'ny fananana akaiky ny vy, dia manana tombony amin'ny vidin'ny famokarana ambany, ny ductility tsara, ny tanjaky ny harerahana tsara ary ny fanoherana ny akanjo, ary ny fananana mekanika tsara. Izany no be mpampiasa amin'ny milina fandriana, valves, crankshaft, piston, cylinder sy ny faritra hafa amin'ny motera fiara. Very bobongolo fanariana Ny teknolojia dia karazana teknolojia tsy misy fisarahana, Ny fomba fananganana harato akaiky amin'ny fanariana mazava tsara tsy misy fasika dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana vy, vy, alimo ary firaka manezioma. Very mode ductile vy, vita amin'ny Noho ny votoatin'ny karbônina avo lenta, ny fanitarana ny graphitization sy ny toetra hafa mandritra ny fanamafisana, ny fikosoham-bary, ny fikosoham-bary ary ny porosity, ny mainty karbônina ary ny lesoka hafa dia matetika vokatry ny fahombiazan'ny coating. Vokatr'izany, Ny fanatsarana ny fananana coating amin'ny epc dia rohy manan-danja hiantohana ny vokatra fanariana.
Amin'ny famokarana epc, ny kalitaon'ny coating dia tena zava-dehibe amin'ny kalitao fanariana. Ny coating Epc dia tokony hanana permeability tsara, hery, sintering ary peeling Toy ny fampisehoana. Amin'izao fotoana izao, ny fikarohana dia atao amin'ny ankapobeny momba ny fiasan'ny coating, ny mekanika fifandraisana eo amin'ny coating sy ny vokatra simba EPS, ny fiantraikan'ny coating amin'ny kalitaon'ny fanariana sy ny coating mitambatra. Fikarohana, ao amin'ny fanamboarana coating fanatsarana, additive tahan'ny coating fampisehoana, coating dingana fanomanana. Avy amin'ny famokarana sy ny fampiasana ny epc coating, ny famokarana ny coating dia tokony ho manara-penitra Dingana fanomanana, vokatra fanariana avo; Ny tsenan'ny fametahana bobongolo very dia mikorontana, sarotra sy lafo ny raikipohy coating, sarotra ny fanomanana, ary na ny firafitry ny raikipohy aza dia diso. Tsy vitan'ny hoe misy fiantraikany amin'ny vokatra fanariana epc izany, fa manakana ny fivoaran'ny teknolojia EPC sy ny indostrian'ny coating.
1 Fitakiana coating ny ductile vy amin'ny epc fanariana
Ny mari-pana fanariana ny nodular cast vy dia matetika 1380 ~ 1480 ℃, kely ambany noho ny vy fanariana. Ny hakitroky ny nodular cast vy dia 7.3g/cm3, ambony lavitra noho ny an'ny manezioma sy alimo firaka, ka ny nodular cast vy ranon-javatra. Ny fiantraikan'ny hafanana sy ny hery amin'ny coating mandritra ny famenoana dia manan-danja kokoa noho ny an'ny magnesium sy aluminium firaka. Ao amin'ny dingan'ny vy ductile amin'ny epc, ny coating dia miasa noho ny fizotry ny tsindry ratsy Eo ambanin'ny fanjakana, amin'ny lafiny iray, ny lafiny anatiny amin'ny coating dia mila manohitra ny tsindry mavitrika sy ny fanerena static amin'ny ranon-javatra vy ductile hafanana avo, ary ny fahasamihafana anatiny sy ivelany amin'ny coating dia lehibe, ary ny coating dia mora. rehefa tsy ampy ny herin'ny hafanana ambony Mahatonga ny fanariana sag na ny fanariana deformation. Ny vy vita amin'ny nodular dia miavaka amin'ny mari-pana fanariana avo sy ny fanimbana haingana ny EPS. Ny vokatra gazy dia mirakitra ny ankamaroan'ny vokatra simba, anisan'izany ny rano kely Ny vokatra avy amin'ny fanjakana sy ny solids. Ny vokatra simba dia ateraky ny be dia be ary mameno ny lavaka fanosotra manontolo, mba hialana amin'ny tsy fahombiazan'ny vokatra simba amin'ny famoahana ny coating, ka miteraka pores vy sy ketrona. Ny coating dia tokony hanana fidiran'ny rivotra tsara amin'ny fisehoan'ny lesoka toy ny hoditra sy ny fidiran'ny karbonina. Tokony hofehezina ao anatin'ny elanelana mety hisy fiantraikany amin'ny tanjaka sy ny permeability ny coating ny fanondroan'ny fampisehoana coating. Ny refractoriness, ny fananana sinter, ny endrika aggregate ary ny haben'ny poti dia misy fiantraikany mivantana amin'ny tanjaka sy ny permeability ny coating epc. Ao amin`ny dingan`ny coating fanomanana, afo-mahatohitra taolana Zava-dehibe indrindra ny fisafidianana fitaovana.
2 Famolavolana sy fizotry ny coating vy ductile ho an'ny epc
Refractory aggregate no singa fototra amin'ny coating. Ny fahombiazan'ny coating dia mifandray akaiky amin'ny toetra ara-batana sy simika amin'ny aggregate refractory. Ny fampiasana ny fampiatoana dia manakana ny refractory aggregate ao amin'ny loko Sedimentation, ka ny coating manana thixotropy tsara. Nandritra ny dingan'ny fandatsahana, ny coating dia mila mandalo hafanana mafana vokatry, ary ny fitambaran'ny fampiasana ny binders samy hafa miantoka ny coating fanomanana Ny coating dia manana fahafahana mitazona hery amin'ny mari-pana isan-karazany. Coating avy amin`ny akora ho amin`ny fananganana ny coating mba hanomanana, coating sy ny fanamainana dingana telo lehibe. Coating avo lenta Ny fitaovana ho fanampin'ny fampisehoana tsara, ny fahombiazany ara-teknolojia dia tena zava-dehibe ihany koa, ny fanomanana ny coating, ny fizotran'ny coating dia tokony ho tsotra, mety amin'ny asa, coating surface malama, tsy misy pinhole, triatra sy ny sisa.
3 Toetran'ny coating ny ductile vy epc fanariana
3.1 Herin'ny coating
Toy ny refractory coating coating eo amin'ny endriky ny endrika, ny manjavona fomba coating amin'ny hery avo dia tsy afaka manatsara ny hery sy ny hamafin'ny endrika, fa koa azo ampiasaina ho toy ny ranon-javatra metaly sy bobongolo. Ny sakana mahomby eo anelanelan'ny fasika dia miantoka fa ny coating dia mahatohitra ny tsindry mavitrika sy static ary ny tsindry adsorption ivelany entin'ny dingan'ny famenoana ranon-javatra amin'ny hafanana avo, ary mampihena ny fasika mekanika mipetaka amin'ny fanariana. Noho izany, ny tanjaky ny coating dia tondro manan-danja handrefesana ny fahombiazan'ny coating.
3.2 Fandalinana ny porosity sy ny permeability ny coatings
Ny fandatsahana vy vy, ny fisehoana EPS eo ambanin'ny fihetsiky ny hafanana avo lenta haingana ny fanimbana ny gazy, miaraka amin'ny ranon-javatra metaly eo anoloana, ny vokatra azo avy amin'ny lavaka amin'ny alàlan'ny fanariana coating, ranon-javatra metaly. Ao anatin'ny equilibrium dynamique ny famoahana ny famenoana lasitra sy ny vokatra simba. Raha ambany loatra ny fahafahan'ny rivotra amin'ny coating, dia tsy azo esorina amin'ny lavaka ny vokatra manimba ara-potoana, izay hitarika ho amin'ny pores sy ny tsy fahampian'ny karbaona eo ambanin'ny hoditry ny fanariana. Sy ny sisa. Raha avo loatra ny permeability ny rivotra amin'ny coating, dia haingana ny hafainganam-pandehan'ny bobongolo, mora miteraka fasika mekanika. Miaraka amin'ny fitomboan'ny hatevin'ny coating, ny fiantraikan'ny hakitroky ny coating amin'ny permeability rivotra dia hihena tsikelikely. High permeability Ny coating dia manana savaivony salantsalany lehibe kokoa ary lehibe kokoa ny haben'ny fizarana.
4 Ny fiantraikan'ny coating amin'ny kilema amin'ny nodular fanitso
4.1 Ny fiantraikan'ny coating amin'ny tsy fahampian'ny kentrona amin'ny fanariana
Ao amin'ny fomba very fanariana, rehefa EPS fisehoana mahafeno ny dingan'ny lo ny hafanana vy ranon-javatra, ny ranon-javatra lo ny vokatra niforona mitsingevana eo ambonin'ny vy ranoka na mifikitra amin'ny coating, izay sarotra ny ho lo tanteraka. Rehefa metaly Rehefa mangatsiatsiaka sy mivaingana ny ranon-javatra, dia tsy mitovy amin'ny an'ny metaly ranon-javatra ny fihenjanana ambonin'ny sisa tavela. Rehefa mihena ny fanariana, dia miforona eo amin'ny hoditry ny fanariana ny vala mihozongozona na mitete.
4.2 Ny vokatry ny coating eo amin'ny fanariana karbôna deposition kilema
Ny tsy fahampian'ny karbônina dia vokatry ny habetsahan'ny karbaona vokarina mipetaka amin'ny tampon'ny coating, izay tsy azo esorina amin'ny lavaka ary mifikitra amin'ny fanariana. Matetika no hita taratra ao amin'ny fanariana ho toy ny sarimihetsika karbaona amin'ny mamirapiratra ambonin'ny. Ny concave amin'ny fanariana dia feno karbaona mainty, sns. Ao amin'ny famokarana epc, ny tsy fahampian'ny fanariana dia mifandray akaiky amin'ny fitaovana bika, ny firafitry ny fanariana, ny coating ary ny fizotran'ny fanariana.
5 Torolàlana fikarohana momba ny coatings ho an'ny ductile vy epc fanariana
Nodular nanary vy very bobongolo fanariana, noho ny mari-pana fandatsahana ambony, foam endrika lehibe entona famokarana, ratsy compaction fanariana. Ny fametahana vy nodular dia iharan'ny metaly mitsonika mandritra ny famenoana lasitra Ny fiantraikany mahery vaika sy ny tsy fitoviana anatiny sy ivelany, ny coating dia tsy maintsy manana hery tsara amin'ny hafanana avo, mba hisorohana ny fikorianan'ny ranon-javatra metaly izay nahatonga ny fikorontanan'ny coating ary misy fiantraikany amin'ny latabatra fanariana. Ny kalitaon'ny surface, noho izany dia lasa fanalahidin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny coating ny fananganana sy ny fananan'ny refractory aggregate ary ny fiantraikan'ny additives amin'ny tanjaky ny coating.